दशै हाम्रा लागि श’त्रु बनेर आयो सारा खुशी लु’टेर गयो ! गोविन्दको परिवार (हेर्नुहोस भिडियो) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/दशै हाम्रा लागि श’त्रु बनेर आयो सारा खुशी लु’टेर गयो ! गोविन्दको परिवार (हेर्नुहोस भिडियो)
असइ बिनोदकि श्रीमतीको यस्तो छ भनाइ, धनगढी सानैमा बाबु बितेपछि असइ बन्ने गोविन्दको सपना पुरा गर्ने दाइ भक्कानीदै सुनाए विगतका ति दु-खहरु,भिडियो मा हेर्नुहोस,सानी अंश घटनाबारे एकचोटी पढेर अन्तिममा भिडियो हेर्नुहोला१२ जुगेडास्थित अस्थायी प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विकको ‘ह ‘त्या गरिएको छ । राति गस्तीमा हिँडेका विक सम्पर्कविहीन भएकामा बिहान नजीकैको मोहना नदीमा श व फे ला परेको छ ।
नदी पारि भारतीय क्षेत्रबाट अवैध रुपमा मालसामान भित्रिने गरेको छ । अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने समूहले प्रसनि विकको ‘ह ‘त्या गरेको हुन सक्ने बताइएको छ । गस्तीमा जाँदा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल श व भेटिएको स्थानदेखि करीब दुई किलोमिटर पश्चिमतर्फ फेला परेको छ । मृ त क विक को घरठेगाना कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिकाका रहेको जनाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदीको नेतृत्वको टोली घ टनास्थल पुगेको थियो ।घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा विक र साउदलाई त स्कर समूहले घे राबन्दी गरेर आ ‘क्रमण गरेको देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले बताए। **** भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्****
‘उखुबारीको छेउमा रहेको बाँझो खेतमा ल’छार’पछा’र भएजस्तो देखिएको छ। छेउमै प्रहरीको एउटा जुत्ता पनि फेला परेको छ। त्यसको करिब ५० मिटर पर स्लिपिङ ब्याग र चप्पल भेटिएको छ। त्योभन्दा ५० मिटर दक्षिणतर्फ खेतमै रगत देखिएको र ‘ह ‘त्या गरेर श व मोहना नदीमा फालिएको देखिन्छ’, उनले भने। र’गत देखिएको नजिकै फु ‘टेको अवस्थामा मोबाइल पनि भेटिएको छ। असई विकले बोकेको एक थान ह ‘ति’यार र गो’ ‘ली फेला परेको छैन।
यो पनि: ठाउँ कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका– ९ स्थित दोदा नदीको किनारको कीर्तिपुर घा’ ट । जहाँ हजारौंको सख्यामा मानिसहरुको उपस्थिति थियो । मानिसहरुको त्यो उपस्थिति न नदीको बहा व हेर्नको लागी थियो न त नदीमा आएको बाढीले पर्याएको क्ष तिकालागी थियो ।
त्यो थियो त केवल नेपाल प्रहरीका असई गोविन्द वि.कको अन्तिम बिदाईकालागी । जहाँ प्रहरीले उनको अन्त्येष्टिकालागी सम्मान र स लामीसहित अन्तिम बिदाई गर्दै थियो । त्यही दृश्य हेर्नकोलागी र गोविन्दलाई अन्तिम पटक भेट्नकोलागी मानिसहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्याहाँ न को राना थियो न नत को रोनाको कुनै क हर नै थियो । थियो त केवल गोविन्दकोलागी दुः खी हुँदै रोईरहेको हजारौं मनहरु थियो । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
त्यो घा टमा कति ला सहरु पो’ लिए । जस्को बारेमा घरपरिवार र आफन्त बाहेक अरुलाई थाहै भएन । तर गोविन्द बि.कलाई पोल्दा पुरै देशले थाहा पायो । सारा नेपालीहरुको मन रोईरह्यो । उता गोविन्दको चि तामा आगो’को ज्वा’ला दन्किंदै गोविन्दको शरीरलाई ज’लाउँ’ दै थियो भने यता नेपाली मिडियामा गोविन्दको ठुलो ठुलो फोटो राखेर उनको ब्रेकिंग समाचार बनाईरहेको थियो ।
ठिक गोविन्दको जस्तै कथा, ब्यथा र परिघ टना आजभन्दा तीन बर्ष अघि त्यसै ठाउँमा घटे को थियो । उनी गोविन्द वि.क नभई गोविन्द गौतम थिए । गौतमलाई पनि दोदाकै नदी किनार (पचकडीया घाट) मा ढालिएको थिायो । र त्यसै ठाउँमा गोबिन्द गौतमको राष्ट्रिय सम्मान र सलामीसहित अन्त्येष्टि गरिएको थियो, जुन ठाउँमा गोविन्द वि.को अ न्तेष्टि गरिएको थियो ।
को थिए गोविन्द गौतम ? र कसरी मा’ रि’ एका थिए त ?
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–४ ‘घ’ गाउँ जनबस्तीका गोविन्द गौतम सामान्य परिवारका थिए । सम्पत्तिको नाममा लालपुर्जाबिहीन १० कठ्ठा जमिन थियो। त्यसमा तीन जना दाजुभाइलाई भागबण्डा लगाउनुपर्ने । परिवारमा माइलो छोरा थिए उनी । साथमा बुवाआमा, श्रीमती र ३ छोरी थिए । घरको आयस्रोत अरु थिएन । खेतीकिसानीले वर्षभरी खान नपुगेपछि उनी केहि महिना अघि मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किका थिए । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
बिरामी बुवालाई अ स्पताल लैजाने तयारीमा थिए गौतम । घर नजिक पर्ने हराइरहेको सी मास्तम्भ नम्बर २०० नजिक नेपाली भूमीमा कल्भर्ट बनाउने विषयमा अघिल्लो दिन बेलुकाबाट विवा द भइरहेको थियो। उनी बुवालाई खाना खाएर तयार हुन भन्दै वि वादीत ठाउँमा गए । त्यहाँ नेपाल प्रवेश गरेका भारतीयलाई स्थानीयले ल’खे’ टेपछि दुबैतर्फबाट ढु’ ङ्गा हा’ ना’ हा न हुँदै थियो । गौतम भीडबाट वरै नेपालतर्फ थिए । एकाएक गो’ली च’ ल्यो र गौतम सी मास्तम्भ नम्बर २०० नजिक ढ ले । उनको २०७३ साल फागुन २६ गते नेल–भारत सीमा वि’वादका क्रममा भारतीय सुरक्षा’कर्मीले च ला’ एको गो’ ली ला’गेर ज्या’न ग’एको थि’यो ।
गौतमलाई सरकारले स’हिद घो’षण गर्यो । गो’ली च लाउने माथी कार’वाही गर्न दुबै देशका सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको पनि वर्षौ बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही का’रवा’ ही भएको सुनि एको छैन । यद्यपी असई बिकको ‘ह’ त्या’मा संलग्न ७ जनालाई भने मंगलबार प्रहरीले सार्बजनिक गरेको छ । थप दुई जना अझै फ’रार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अध्ययनको लागि आफैले अष्ट्रेलिया पठाएको श्रीमती सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि मिडिया मार्फत श्रीमानको यस्तो संदेश (भिडियो सहित)